Ihe unu na-amabeghị: 5 Jụụ Atụmatụ na Apple emeghị ịkpọsa na
On 8th nke June afọ a, Apple haziri ya ukwuu na-echere Worldwide Developers 'Conference (WWDC) na San Francisco. Ukwuu na-echere n'ihi Apple na-atụ anya na-abịa na ụfọdụ kemgwucha ume-ewere na ihe dị mkpa ọkwa na mmekọrita ọhụrụ nkwalite mere ka ya na ngwaọrụ na software. Na maa ihe, ọ meworo kpọmkwem na, site abịa na ika ọhụrụ iOS 9. The scintillating ogbo melite maka oge na-apụta ọtụtụ atụmatụ nke iOS 9 na-mara ọkwa, na ndị a ma ama gụnyere usoro na-"proactive", Siri na-echeta, Chakwasa ihie na-ike na na. Ma na-eche, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ihe banyere iOS 9 nke Apple emeghị ịkpọsa (ma ọ bụ eleghị anya ha na-enweghị oge zuru ezu n'ihi na). Ebe a bụ ndepụta nke ndị niile ọwọrọiso atụmatụ:
O yiri ka Apple ka churned si a mma karịsịa maka ọrụ nwere nta ikike iOS ngwaọrụ, kpọmkwem maka ndị na 8 GB ma ọ bụ 16 GB ngwaọrụ. Mgbe ị na-na-na nbudata ihe ngwa si ​​ụlọ ahịa, na App thinning atụmatụ ga-download naanị ndị ibe n'ibe na akụkụ nke ngwa, nke ngwaọrụ gị nwere ike aka. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone 5, nke a mma ga na-download ndị components nke ihe ngwa, nke na-n'ezie chọrọ na-agba ọsọ na-eji ngwa na ngwaọrụ gị. Nke a ga-azọpụta a otutu ohere, wepụ niile titbits nke ngwa nke isi fatten ya elu.
Ndi na ị dị nnọọ Akara a na-akpali akpali mgbaru ọsọ gị football egwuregwu na chọrọ ị pụrụ etu ọnụ banyere ya mgbe e mesịrị ka ndị enyi gị na ya clip? Ọfọn, nke a ga-ugbu a ga-ekwe omume na Max Kit atụmatụ nke iOS 9 usoro, nke bụ ihe ijuanya na ọ bụghị mara ọkwa na WWDC 2015. Nke a mma-enye Mmepụta idekọ mkpachị gị gameplay mgbe ị na-akpọ. Na ihe niile a na-eme na ndabere, na-enweghị enye nsogbu gị Ịgba Cha Cha ahụmahụ otu bit. Ọzọkwa, ị pụrụ dezie clip i weghaara n'ime ngwa onwe ya. Ị nwere ike ugbu mfe ịkekọrịta obere vidiyo nke zuru okè egbu na ị gburu, ma ọ bụ gigantic Home Run, na ihe nile ndị enyi gị na ndị dị iche iche na-elekọta mmadụ media nyiwe. Ma ọ bụ nanị ezu, ị nwere ike dị ịzọpụta ya na gị na disk na-ekiri ya mgbe e mesịrị, n'elu na n'elu ọzọ (na eleghị anya-akpọ gị onye amamihe).
Lower ikpe keyboard
Nke a bụ otu atụmatụ mgbe na-agụ banyere nke, ọtụtụ n'ime ị ga-aga, 'N'ikpeazụ ", na a rie ude nke nkwalite enyemaka. Ihe niile ị na-ọrụ nke iOS 7 nwere a siri ike oge n'ịgbanwe ngwaọrụ gị keyboard. Ruo ugbu a, ndị iOS 7 keyboard-eji na-egosi niile odide dị ka isi obodo leta ndabara, na-eme 'uka mgbagwoju anya' banyere ma nnofega isi e enwe ma ọ bụ. Ma ugbu a, na a obere tweak nke mmelite na iOS 9, ọ ga-abụ doro nnọọ anya ma Mgbanwe isi na-arụ ọrụ ma ọ bụ. N'ihi ya, na nke a, 'nnofega-isi ngwọju-anya ọbụla' N'ikpeazụ abịa a nso.
Na iOS 9, Apple ka ọtụtụ na-arụ ọrụ rụọ ọrụ ndị search nhọrọ ke ngwaọrụ gị. Mbụ, ndị iOS 9 na-eweta ke 'Ntọala Search' nhọrọ, ka mfe ịchọta ọnọdụ na ị na-achọ. Ọ ga-abụ nnọọ na-enye aka na mbenata mgbalị nke scrolling gburugburu fọrọ n'ebe nile search menu, na-ahụ na otu ọnọdụ nke kwesịrị ka a gbanwee. Ọzọkwa, Search ka nwetara nhọrọ nke na-enyocha App History, Content indexing iji Chakwasa ihie na Web nkè. Ọzọ obere tweak na nke a mma bụ 'Back-Chọọ' nhọrọ nke ngwa ngwa-enyere gị aka sọfụ azụ Chakwasa ihie, mgbe unu ulo oru ngwa. Na mgbe ị na-esi Search mmanya, e nwere ihe 'Back to App' nhọrọ dị ka mma. Nke a bụ otu ụzọ Apple chọrọ inye ụfọdụ siri ike mpi Google Ugbu a, mgbe ọ na-abịa searches.
Ọfọn, nke ahụ bụ akụkụ ọzọ nke a na-n'ezie ga-nabatara niile Apple ọrụ. Na iOS 9, ị nwere ike gbanyụọ vibration nke ngwaọrụ gị kpam kpam. Ugbu a, ọ dịghị alerts na Ịma Ọkwa na ndị ufiop vibrations nwere ike ahụhụ gị. Dị nnọọ ga-esi Accessibility NchNhr, na-atụgharị ọma jijiji mgba ọkụ ka 'Off'. Otú ọ dị, i nwere ike chọrọ iji nke a otu na-elekọta, dị ka a ga kpamkpam gbanyụọ vibration nile Ịma Ọkwa, gụnyere ndị maka ngwa na mberede alerts. Ọbụna iOS onwe ya na-enye gị a ịdọ aka ná ntị mgbe ị na ya, dị ka ọ na-ekwu, "mgbe a mgba ọkụ bụ gbanyụọ, niile vibration na gị iPhone ga-nkwarụ, gụnyere ndị maka ala ọma jijiji, mbufịt na ndị ọzọ na mberede alerts." Ọfọn, na dị mkpa!
E wezụga atụmatụ ndị a, e nwere ihe ole na ole ndị ọzọ dị ịrịba ama ndị na iOS 9, bụ nke Apple kwughị banyere na WWDC. Ka ihe atụ, Map Customization, ihe mmetụta Profaịlụ, Ikuku Car Play, shortcut Bar, Home Security Profaịlụ na na.
Map customization ihe atụ, na-eji Apple Maps na-agwa gị ihe niile si na-eje ije ntụziaka iji na-ebe na ụzọ ọpụpụ ụzọ bụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Apple Maps-emesị achụ Google kasị Mmanu atụmatụ na iOS 9.
Nke atụmatụ otú ị na-amasị ndị kasị banyere iOS 9? Ka anyị mara.
> Resource> iOS> ihe unu na-amabeghị: 5 Jụụ Atụmatụ na Apple emeghị ịkpọsa na iOS 9